အမုန်းတရားနဲ့ အကြမ်းဖက် လှုံ့ဆော်မှု အရေးယူဖို့ ကုလ တိုက်တွန်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မိတ္ထီလာ အရေးပေါ်သတင်း ရဲမြင့် နောက်တမျိုးယုတ်မာပြန်ပြီ Mandalay PM Ye Myint ordered the closure of another Meiktila Masjid
“အမေ့လျော့ခံ မြန်မာမွတ်စလင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခံရမှု” »
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Yanghee Lee ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူသိရှင်ကြား စော်ကားမော်ကား ပြောဆိုတာတွေ၊ အမုန်းပွားအောင် လှုံ့ဆော်ဟောပြောတာတွေ ကို နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူပေးဖို့ မြန်မာအစိုးရကို ကုလသမဂ္ဂက သောကြာနေ့က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ အမုန်းတရားနဲ့ Ms. Lee ကို ထပ်ခါတလဲလဲ တိုက်ခိုက် ပြုမူပြောဆိုနေတာတွေကိုလည်း ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့က ကန့်ကွက် ရှုတ်ချလိုက်တာပါ။ မအင်ကြင်းနိုင်က အကြောင်းစုံကိုပြောပြမှာပါ။
” Ms. Yanghee Lee ရဲ့ အစီရင်ခံစာအပေါ်မှာ မတ်လ ၁၀ရက်နေ့တုန်းက ထုတ်ပြန်တဲ့ အစိုးရရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကို ကြည့်ရင် ကျနော်တို့ အဲ့ဒီ့မှာ ရှာပြီးတော့ တွေ့နိုင်တယ်။ အဲ့တော့ အဲ့ဒီ့မှာ လူတဦးချင်းကိုသော်လည်းကောင်း၊ လူမျိုးတမျိုးနဲ့ တမျိုးကိုသော်လည်းကောင်း၊ လူတစုနဲ့ တစုကိုသော်လည်းကောင်း၊ အမုန်းပွားအောင် လှုံ့ဆော်ဖန်တီးတဲ့ စကားတွေကို ပြောဆိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ထိရောက်စွာ အရေးယူနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှ မြန်မာအစိုးရကနေပြီးတော့ စာရေးဆရာ ထင်လင်းဦးကို အရေးယူခဲ့တဲ့ဟာကို သာဓက ပြပြီးတော့ အမှုစွဲဆိုထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့တော့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Yanghee Lee အပေါ်မှာ အခု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဘုန်းတော်ကြီးတပါးကနေပြီးတော့ ဒီလိုမျိုး ရဟန်းတော် ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ မညီအောင် ပြောဆိုချက်တွေကို မြန်မာ အစိုးရအနေနဲ့ နောက်ကွယ်ကနေ တမင်ဖန်တီးပြီး လုပ်ဆောင်နေသလား၊ လူတဦးနဲ့တဦး အမုန်းပွားအောင် စီမံဖန်တီးနေသလားဆိုတာတွေကို သံသယကင်းကင်းဖြစ်သွားအောင် လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ပြဌာန်း ထားတဲ့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေအရ ထိုက်သင့်တဲ့ပုဒ်မတွေနဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လိုတယ်လို့ပဲ ကျနော်ကတော့ ပြောချင်တယ်။”
” ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ပေါ့နော်။ ညိုးနွမ်းပျက်စီးစေတဲ့ အတွက် ဒါမျိုးကိုတော့ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူသင့်တယ်လို့ ကျနော်ကတော့ မြင်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်က ကျနော်တို့ တကမ္ဘာလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကလည်း ခန့်အပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကလည်း ပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့ ဒီလိုမျိုး သံခင်းတမန်ခင်း လာတဲ့သူကို မခြေမငံ ဆက်ဆံတဲ့ ကိစ္စရပ်မျိုး ကတော့ ထိုက်သင့်တဲ့ အရေးယူမှုမျိုး ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ ကျနော်တို့ကတော့ ပြောချင်ပါတယ်။”
This entry was posted on March 21, 2015 at 12:57 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.